MAJA Education Center (MEC)
ဂျပန်နိုင်ငံကို ပညာတော်သင်သွားလိုသူများအတွက် Online Study in Japan Fair 2022
About MAJA Education Centre History. Please see MEC.
Study in Japan Online Session: KOSEN – National Institute of Technology, Japan
MAJA Head Office, MAJA Education Centre နှင့် MAJA Office (Mandalay Branch) တို့၏ ရုံးချိန်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ စတင်၍ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ် မည်ဖြစ် ကြောင်း အသိပေး ကြေငြာခြင်း။
Study in Japan Fair 2022 ကို Online ကနေတဆင့် ကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
MAJA EDUCATION CENTRE တွင် ဂျပန်ဘာသာစကားကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ သင်ယူလေ့လာရင်း ဓလေ့ထုံးစံများကို နားလည်သိရှိလာစေရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဂျပန်ဘာသာစကား သင်တန်းများ ကို ဖွင့်လှစ် သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။
MAJA 20th Anniversary Scholarship and Exchange Program Webinar ကို စိတ်ပါဝင်စား ကြသည့် အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
(1) ဂျပန်ဘာသာသင်တန်းကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း။ (2) ဂျပန်တက္ကသိုလ်တွေအကြောင်း သိချင်တဲ့သူတွေ ဂျပန်စကားမလိုဘဲ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ကျင်းပပေးမယ့် Student Exchange Meeting
International Symposium on Organizational Management and Economics Through Difficult Time and Uncertainty အား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ဝင်စားသူများ မည်သူမဆို register ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
MAJA စတင်တည်ထောင်သည့် နှစ် ၂၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် ဂျပန် Scholarship Program များနှင့် Exchange Program များအကြောင်း ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။